Maxay yihiin talooyinka ugu dambeeyay ee SEO ee kor u kaca Google top of?
Waxaa jira isbeddel weyn oo isbeddel ah iyo cusbooneysiiyay Google oo ilaa iyo haatan sanadkan. Waxa kale oo jira tiro aad u weyn oo ka mid ah talooyinka ugu dambeeyay SEO ee 2017 ee laga heli karo marin u furan meel kasta oo Webka ah. Sidaa daraadeed, maxay tahay xalka ugu fudud ee aad ka soo qaadan kartid noocyada kala duwan ee kala duwan ee kala duwan, tilmaamaha, iyo talooyinka? Xusuusnow, istiraatiijiyadaha Raadinta Weynaha ee hadda jira ee aad haysatid, faa'iidooyinka badan ee darajadaada aad hesho. Aan aragno aragti gaaban oo aan aragno waxa isbedelaya ee weli hagaagsan, taas oo laga yaabo inay ka luntay qasaaro, iyo haddii ay jiraan waxyaabo hore oo aan hore u shaqayn, ama xitaa ka sii xun, sidoo kale waxay noqon karaan nidaamyada ku xadgudubka dabiiciga ah ee lagama maarmaanka ah iyada oo ciqaabta Google. Warbaahinta Bulshada
Maalmahan, dhammaan miidhiyaha warbaahinta bulshada ayaa sii kordhaya liiska Google ee bogagga natiijooyinka raadinta raadinta (SERPs). Sida laga soo xigtay cilmi-baaristii dhawayd, khabiirada warshadaha waxay tilmaamayaan in ay leeyihiin xiriiryo tayo leh oo tayo leh oo leh hoggaan bulsheed oo hor leh (sida Google+. YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, iwm. ) waxay sii wadayaan inay helaan awoodahooda, ugu yaraan mustaqbalka la filayo.
Muuqaalka Wanaagsan ee Video
Waa wax aan la yaab lahayn in faahfaahinta fiidiyowga ay hadda tahay xal aad u fiican oo ah xoojinta dadweynaha ee xooggan iyo khibrada user-ka. Maxaa badan - isbeddelkani hadda wuu ka macquulsan yahay sidii loo isticmaali lahaa sannadka 2016. Hadda, badiba talooyin SEO ah oo ugu dambeeyay helay tixraac si videos fure u awood u yeelanaya hagaajinta bogga guud ee guud. Qaar ka mid ah tirokoobyada ayaa soo bandhigay talooyin aad u cajiib ah, sida ay muujinayaan ilaha warshadaha ugu caansan, muuqaalka fiidiyowga waxaa lagu qiyaasay in uu hadda sii wadi doono in ka badan 40% kor u kaca heerka-kordhinta (marka la barbardhigo qoraallada asalka ah).
Isticmaalka Mobile Optimization Trend
Halkan waa mid ka mid ah talooyinka ugu muhiimsan ee SEO. Kaliya waydiiso haddii website-kaaga ganacsigaagu yahay mid cilaaqaad mobile ah. Aynu wajahno - waxaad haysataa wakhti adag oo la heli karo illaa iyo inta uu Moobaylka ugu dambeyn la qaadi doono (Google dhawaan ayaa dib u xaqiijisay inuu yimaado 2018). Sidaa daraadeed, sida ugu dhakhsaha badan ee telefoonada gacanta wax looga beddelo ayaa wax ka beddeli doona xaqiiqada, noqoshada xaalad caadi ah. Taasina waa sababta ugu sareysa ee aad u soo carartay dib-u-fiirinta iyo horumarinta istaraatiijiyadaha aad ufududeyneysid oo badanaa ayadoo badanaa ay tahay heerka caadiga ah ee raadinta mobile.
Xulashada Codka Voice
Inta badan isbeddelka hadda socda ee loogu talagalay wacyigelinta mobile, raadinta codku waxay u muuqataa mid ku haboon ka dib! Si dhakhso ahna codka raadinta codka ayaa la filayaa inuu noqdo mid cusub, halkii laga reebayo. Marka laga reebo xaqiiqda ah in raadinta codka si wax ku ool ah loo helo amniga gaadiidka, awooddeeda kobcinta ayaa ay sii korodhey shirkadaha warshadaha, mid kasta oo kasta oo soo bandhigaya qaababka gaarka ah ee qaabka raadinta cod-bixinta (e. g. "Cortana" by Microsoft, "Google Now" by google search engine, iyo "Siri" by Apple).
Qodobbada qotoda dheer
Halkan waa soo jeedin kama dambeys ah. Inta kale ee ka mid ah talooyinka ugu dambeeyay ee SEO, waxaa jira aragti wanaagsan oo ku saabsan ururinta content, taas oo hadda noqday more mug leh oo ka fiican. Waxaan u jeedaa halkan in gundhigga qoraalka uu yahay hab wax ku ool ah oo la wadaagayo miisaaniyada horey loo cayimay ee laga soo xigtey ilo kala duwan oo ilo kala duwan ah si ay uga doodaan dhegeystayaasha bartilmaameedka. Ingiriisi cad, taas oo u taagan sifada noolaanshaha xoojinta mowduuca ilaha awooda sare ee saameynta isbiirtiga ee heer sare. Tani waxay u egtahay in ay u muuqato mid la yaab leh, laakiin qaar ka mid ah guubaabiyeyaasha caanka ah ee Moz iyo Hubspot, tusaale ahaan, waxay mashruucan muddo dheer soconayeen (ka hubso Inbound. org). Sidaa darteed, waa waqti aad ku fekereyso raacitaanka tabo cusub oo cusub oo bilawda inaad ka soo qaadatid oo aad ka sameysid ilaha kale ee hay'adda ugu sarreysa ee la xariira mawduucaaga Source .